बायोपिक लहर- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
अभिनेता सञ्जय दत्तको जीवनीमा आधारित बायोपिक सञ्जुले तीन हप्तामा भारू ३ सय करोडको व्यापार गरिसकेको छ । त्यसो त यसलाई कतिपय समीक्षकले इमानदार नभई बनाइएको बायोपिक पनि भनेका छन् ।
यतिबेला हलिउडदेखि बलिउडसम्म बायोपिकको लहर चलिरहँदा नेपालमा पनि बायोपिक बनाउने लहर देखिन थालेको छ ।
श्रावण ११, २०७५ सुशील पौडेल
काठमाडौँ — यतिबेला मिलन चाम्स निर्देशित फिल्म बोबी राम्रै दर्शकको साथ पाएर चलिरहेको छ । यसमा एउटा भुइँमान्छे जोडीको कथा समेटिएको छ । आम रूपमा नचिनिएका उमेश थापा र कविता गुरुङको प्रेम, विवाह र संघर्ष समेटिएको बोबीलाई निर्देशक चाम्स बायोपिक भन्न रुचाउँछन् । त्यसो त केही अघि उनै चाम्सले दृष्टिविहीन सृष्टि केसीको जीवनीलाई नै उतारेर बनाएको ब्लाइन्ड रक्स पनि आएको थियो । त्यो फिल्म भने खासै चलेन ।
प्राय: बायोपिक फिल्म कुनै प्रख्यात वा कुख्यात व्यक्ति जसको जीवनबारे धेरैको चासो अडिएको हुन्छ, तिनैमा आधारित रही बनाइन्छ । नेपालमै पनि १९ वर्षअघि आदिकवि भानुभक्त होस् वा वीर गणेशमान आएका थिए । सात वर्षअघि गायक भक्तराज आचार्यको जीवनीमा आचार्य बनेको थियो । तर यी सबै फिल्मले व्यावसायिक रूपमा हावा खाएपछि बायोपिक फिल्म बनाउन हत्तपत्त कसैले आँट गर्न सकेनन् ।
यतिबेला हलिउडदेखि बलिउडसम्म बायोपिकको लहर चलिरहँदा नेपालमा पनि बायोपिक बनाउने लहर देखिन थालेको छ । थाहा आन्दोलनका अभियन्ता रूपचन्द्र विष्टमाथि बनेको रुदाने रिलिजका क्रममा छ भने शंखधर साख्वाको जीवनीमा आधारित एनिमेटेड फिल्म द लिजेन्ड अफ शंखधर पनि निर्माण भइसकेको छ ।
झमक घिमिरेको जीवनीमा आधारित रही जीवन काँडा कि फूल बायोपिक पनि बनिसकेर रिलिजका क्रममा छ भने राजा सहलेसको जीवनीमा रही अर्को बायोपिक सहलेसको पनि निर्माण घोषणा गरिएको दुई वर्ष भइसकेको छ । तर उक्त बायोपिक अझै प्रि–प्रोडक्सन चरणमै थन्किएको छ । गत वर्ष निर्माता सन्तोष सेनले पूर्वयुवराज दीपेन्द्र शाहबारे विवेककुमार शाह लिखित ‘मैले देखेको दरबार’ मा आधारित रही दीपेन्द्र सरकार बनाउने घोषणा गरेका थिए । यसको निर्माणको पनि टुंगो भने अझै लागेको छैन ।
अधिकांश फिल्मकर्मी अझै पनि नभनिएको कथाबारे फिल्म बनाइरहँदा केहीले भने पहिले नै धेरै थाहा पाइसकिएका र चिनिएका चर्चित पात्रलाई लिएर फिल्म बनाउन कस्सिन थालेका छन् । बलिउडमा बायोपिकको ट्रेन्ड यतिबेला निकै फस्टाएको छ । सिल्क स्मिताको जीवनीमा आधारित द डर्टी पिक्चर्स वा सात पटकको राष्ट्रिय च्याम्पियन धावक पान सिंह तोमरमाथिको फिल्म व्यावसायिक हिट र समीक्षात्मक रूपमा अब्बल मानिएपछि बलिउडमा बायोपिकको खेती यतिबेला फस्टाएको छ । त्यसयता खेलाडीकै जीवनीमा आधारित भई ‘मेरी कोम’, ‘भाग मिल्खा भाग’, ‘दंगल’, ‘एम एस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी’, ‘सचिन : अ विलियन ड्रिम्स’ बनिसकेका छन् । त्यसबाहेक पनि ‘मंगल पाण्डे : द राइजिङ’, ‘गान्धी’, ‘नीरजा’, ‘नेताजी सुवासचन्द्र बोस’ जस्ता बायोपिकले भारतमा मात्रै नभई विदेशी बक्स–अफिसमा समेत कमाल देखाइसकेका छन् ।
अभिनेता सञ्जय दत्तको जीवनीमा आधारित बायोपिक सञ्जुले तीन हप्तामा भारु ३ सय करोडको व्यापार गरिसकेको छ । त्यसो त यसलाई कतिपय समीक्षकले इमानदार नभई बनाइएको बायोपिक पनि भनेका छन् । उनीहरू फिल्मले सञ्जयका नराम्रा पक्षलाई ढाकछोप गर्न मिडियालाई जबर्जस्ती खलपात्र बनाइएको र सञ्जयसँग जोडिएका कैयन् खराब घटनालाई नजरअन्दाज गरिएको आरोप लगाउँछन् । जेहोस्, राजकुमार हिरानीले सञ्जुमा जति पोको पारेर सञ्जयको जीवनी दिए, दर्शकले भने खुबै रुचाइदिए ।
कतिपय आलोचकहरू हलिउडले भन्न बाँकी सामाजिक कथावस्तु नै पाउन छोडेकाले साइन्स फिक्सन, एनिमेटेड फिल्म र सुपरम्यानमा आधारित फिल्ममा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् । बलिउडलाई पनि अब कथाकै समस्या पर्न थालेको हो त ? किनभने भारतीयका फिल्मकर्मी पनि डाकु वीरप्पनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसम्मका बायोपिकमा लागेका छन् ।
हलिउडमा पनि बायोपिकको लहर राम्रै फस्टाएको छ । महात्मा गान्धीदेखि चार्ली च्याप्लिन, म्याल्कोम एक्स, मोहम्मद अली, अब्राहम लिंकनलगायत कैयन् चर्चित नेता, अभियन्ता वा व्यक्तिका बायोपिक बनेका छन् । बनेका मात्रै छैनन्, दर्शकलाई राम्रैसँग रिझाउन सफल पनि छन् ।
जीवनी : संगीतकार बुल्फग्याङ अमाडिअस मोजार्ट
निर्देशक : मिलोस फोरम्यान
जीवनी : महात्मा गान्धी
निर्देशक : रिचार्ड एटेनवर्ग
३. लरेन्स अफ अरेबिया
जीवनी : टी ई लरेन्स
निर्देशक : डेविड लिन
४. माल्कोम एक्स
जीवनी : माल्कोम एक्स
निर्देशक : स्पाइक ली
५. सिन्डलर्स लिस्ट
जीवनी : ओस्कार सिन्डलर्स
निर्देशक : स्टेभन स्पिलवर्ग
६. रेजिङ बुल
जीवनी : बक्सर जेक ला मोट्टा
निर्देशक : मार्टिन स्कोर्सिस
जीवनी : हेनरी हिल
८. द किङ्स स्पिच
जीवनी : राजा जर्ज छैटौं
निर्देशक : टम हुपर
जीवनी : विलियम वालेस
निर्देशक : मेल गिब्सन
जीवनी : जर्ज एस प्याट्टन
निर्देशक : फ्रयांकलिन जे साफनर
प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ १०:५२
अब हिसाब खुल्ला
श्रावण १, २०७५ सुशील पौडेल
काठमाडौँ — लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र निर्माताको गुनासो रहँदै आएको छ– फिल्मले व्यापार त राम्रै गरेको हो तर हलवाला र वितरक मिलेर हिसाब गोलमाल गरे । वितरकले चुरोटको खोलमा फिल्मको कमाइको हिसाब लेखेर दिने जमानाबाट अब भने नेपाली बक्स अफिसले डिजिटलमा फड्को मार्ने भएको छ ।
डिजिटल क्यामेराले फिल्म निर्माण र मल्टिप्लेक्सले प्रदर्शनमा परिवर्तन ल्याए पनि कमाइको हिसाब पारदर्शी र कर तिर्ने कुरामा नेपाली फिल्ममा ‘गोलमाल’ रहँदै आएको थियो ।
मंगलबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका फिल्म हलमा बक्स अफिस सिस्टम लागू हुने भएपछि अब निर्माताको गुनासो समाप्त हुनेछ । साथै केही लाखको आम्दानी गरेको फिल्मले पनि करोडौंको व्यापार गरेको प्रचार गरेर नयाँ ‘मुर्गा फसाउने’ प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने ठानिएको छ ।
बक्स अफिससँगै पहिलो पटक नेपाली फिल्म व्यवस्थित रूपमा राज्यको कर प्रणालीमा पनि जोडिने छ । यो नयाँ व्यवस्थापछि प्रत्येक हलका सबै सोको दर्शक संख्या, बिक्री भएको टिकट र जम्मा भएको रकमको सूचना बक्स अफिस सेन्टरमा जम्मा हुन्छ । निर्माताले सोझै आफ्नो फिल्मले कमाएको हिसाब हेर्न पाउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सिंगल स्क्रिन र मल्टिप्लेक्स गरी झन्डै पाँच दर्जन थिएटरले गर्ने टिकट बिक्रीलाई सरकारले बक्स अफिस प्रणालीमार्फत करको दायरामा ल्याउन लागेको हो । चलचित्र विकास बोर्डले बक्स अफिस प्रणाली जडानका लागि ब्रेन डिजिट आईटी सोलुसनलाई जिम्मा लगाएको हो । करिब दुई साताको परीक्षणपछि साउन १ देखि बक्स अफिस व्यवहारमा ल्याउन लागिएको हो ।
‘कतिपय मल्टिप्लेक्समा पहिल्यैदेखि आन्तरिक रूपमा बक्स अफिस थियो । अब ती सफ्टवेयरका कोड पनि मूल प्रणालीमै जोडिनेछ भने सिंगल स्क्रिन थिएटरमा बोर्ड आफैंले सफ्टवेयर जडान गरिदिएको छ,’ बक्स अफिस कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष तथा चलचित्र विकास बोर्ड सदस्य नरेन्द्र महर्जनले कान्तिपुरलाई भने । एकैचोटि देशभर बक्स अफिस लागू गर्दा प्राविधिक कठिनाइ आउला भनेर पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लागू गरिएको पनि उनले बताए । ‘दोस्रो चरणअन्तर्गत माघ १ देखि काठमाडौंबाहिर पनि जडान हुनेछ,’ फिल्म वितरकसमेत रहेका महर्जनले भने ।
बक्स अफिस लागू भएपछि टिकट बिक्रीको सबै जानकारी डाटा सेन्टरमा आउनेछ । बक्स अफिसको सूचना आन्तरिक राजस्व कार्यालय, चलचित्र विकास बोर्ड, सम्बन्धित फिल्म निर्माता र वितरक चार पक्षले पाउने गरी तयार पारिएको छ ।
समितिका अर्का सदस्य तथा चलचित्र संघ अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले भने, ‘सम्बन्धित कर कार्यालयदेखि प्रदर्शित फिल्मका निर्माता, वितरकले जुनसुकै ठाउँबाट पनि सही कलेक्सन रिपोर्ट पाउनेछन् । अब भोलिदेखि फिल्मले गरेको साँचो व्यापार थाहा हुनेछ । फ्लप फिल्मले पनि करोड कमायो भनेर होहल्ला गर्दै मुर्गा फसाउने प्रवृत्ति मत्थर हुन्छ कि ?’
आधा शताब्दी लामो इतिहास भए पनि नेपाली फिल्मको व्यापार प्रणाली भने सुरुवाती दिनको भन्दा केही बदलिन सकेको छैन । कम्प्युटर प्रणालीमा टिकट बिक्री नहुँदा दर्शक संख्या र टिकट बिक्रीको संकलित रकम पारदर्शी हुन सकेको थिएन भने सरकारले फिल्म व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउन सकिरहेको थिएन ।
हिसाब पारदर्शी नहुँदा निर्माता, वितरक र प्रदर्शकबीच सधैं लेनदेनलाई लिएर किचलो हुनुका साथै कर छलीका विभिन्न उपायहरू अपनाउने गरिएको थियो । हलवालाले शो संख्या लुकाउनेदेखि दर्शक संख्या घटाएर कर छल्ने गरेको आरोप पनि खेप्दै आएका थिए । हलवालाले कर छल्नका लागि आफूहरूलाई समेत मर्कामा पार्ने गरेको निर्माताको आरोप हुने गथ्र्यो ।
एक दशकयता निर्माताहरूले बक्स अफिस लगाउनुपर्ने माग उठाउन थालेपछि यसको चर्को विरोधमा वितरकहरूको संस्था चलचित्र संघ अग्रपंक्तिमा थियो । यसले गर्दा वितरक र हलमा लाग्ने गरेको आरोपलाई बल पुगेको थियो । बोर्ड अध्यक्ष भएका बेला राजकुमार राईले फिल्मसम्बद्ध सबै संघसंस्थालाई सहमतिमा ल्याएपछि बक्स अफिस लागू गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
राईले नै बक्स अफिस सफ्टवेयरका लागि टेन्डर आहवान गर्नेदेखि निर्माण प्रक्रियासमेत अघि बढाएका थिए । निवर्तमान अध्यक्ष निकिता पौडेलले बक्स अफिसलाई निरन्तरता दिइन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँसकोटाले मंगलबार बक्स अफिसको उद्घाटन गर्ने भएका छन् । बक्स अफिस कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष महर्जन यसले निर्माता र वितरकबीच रहेको अपारदर्शी व्यापारको शंका निवारण हुने बताउँछन् ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:०७
इन्टेलमा एप्पलको सेयर !
आँखा झिम्क्याउँदा जुम
लामो भिडियोको बाढी
गाउँको उत्पादन बजारको खोजी